Ama-CSS3 Corners, Gradients, Shadows nokuningi ... | Martech Zone
NgoMsombuluko, Septemba 26, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Amashidi Esitayela Aqabulayo (CSS) ubuchwepheshe obungakholeki, obukuvumela ukuthi uhlukanise kalula okuqukethwe nedizayini. Sisasebenza nezinkampani ezinezindawo ezinamakhodi aqinile nezindawo zokuxhumana, okubaphoqa ukuthi bathembele konjiniyela ukuthi benze ukuhlela okuthile. Uma kulapho inkampani yakho ikhona, udinga ukumemeza eqenjini lakho lezentuthuko (noma uthole elisha). Ukukhishwa kokuqala kwe-CSS kwakuyiminyaka eyi-14 edlule! Manje sesiku-iteration yethu yesithathu ye- CSS3.
I-CSS3 manje isiyamukelwa futhi isekelwa kuzo zonke izinhlobo zakamuva zesiphequluli, futhi sekuyisikhathi sokusebenzisa ngokunenzuzo! Uma kwenzeka ungaboni ukuthi yini engenzeka nge-CSS3, i-oneextrapixel ihlanganise i-Infographic enhle kuzici ezibalulekile ezinikwe amandla yi-CSS3 - kufaka phakathi ukusebenzisa irediyasi yomngcele (amakhona ayindilinga), i-opacity (ikhono lokubona ngento ethile), izithombe zomngcele, izithombe ezingemuva eziningi, ama-gradients, ukuguqulwa kombala, izithunzi zezinto kanye izithunzi zefonti. Kuneminye imiphumela emangalisayo ongayithuthukisa nge- inhlanganisela ye-HTML5 ne-CSS3.
Kungani i-CSS3 ibalulekile? Njengamanje, abaklami basebenzisa inhlanganisela yemidwebo, i-HTML ne-CSS ukuklama ngokuphelele amakhasi ewebhu ajabulisayo. Lapho zonke izinto zokuqhafaza sezesekiwe, kungagcina sekwenzekile ukuqeda i-Illustrator noma i-Photoshop bese isiphequluli sinikeze imidwebo nezendlalelo ngendlela esingathanda ukuba zenze ngayo. Lokhu kusengaba yiminyaka eyishumi kude - kepha lapho sisondela kakhudlwana, izingosi ezinhle kakhulu esingazithuthukisa futhi kuzoba lula ukuzithuthukisa endizeni.